छाडा कार्यकर्ता, व्युत्पाते मौरी – Green Ilam
प्रा. डा. नृसिह कुमार खत्री
किराहरु मध्यमा मौरी अति उपयोगी किरा हो जो विभिन्न किसिमको हुन्छ । एउटा घरपालुवा मौरीको घारमा तीन प्रकारका मौरीहरु बस्ने गर्दछन, रानी, भाले र कर्मी मौरीहरु । रानी मौरी विशेष किसिमको खाना ख्वाएर ३ दिन भन्दा अगाडिको निशेचित अण्डालाई सह्यार सम्हार गरेर विशेष कोशमा राखेर २१ दिन पछि वाहिर निकाल्ने गरिन्छ । तर एक पल्टमा १ मात्र वयश्क रानी उनीहरुले परीक्षा गरी निकाल्दछ । धेरै रानी निकालेमा धार फुटाएर मौरी गोला विभाजित हुन्छ । विभाजत भएपछि त्यो गोलाको शक्ति कमजोर हुन्छ । वर्णशकर प्रवृत्ति बढदै जान्छ । भाले मौरी भनेको प्रकृतिको विचित्र रहश्य अनिशेचित अण्डबाट त्यो उत्पन्न हुन्छ र सामान्य तरिकाले अण्डाबाट निश्कनेहरु कर्मी मौरी हुन्छ । कुखुराको पनि भाले नलागेको अण्डा त हुन्छ तर ओथारा दिदा वच्चा नभइकन ओथारमा खोलिन्छ, सडदछ । तर मौरीको भने भाले वच्चा हुन्छ, यसलाई ड्रोन वा डौठे भनिन्छ । डौठेको काम भने रानी संग समागम मात्र हो यसलाई त पछि पछि कर्मीहरुले घारबाट लछारेर वाहिर निकाल्दछन । एकपल्को समागमबाट भाले मर्दछ । मरेरपनि उसले रानीमार्फत आपनो अस्तित्व हस्तानत्र गरेको हुन्छ । बैज्ञानिकहरु संग यसबारमो कुरा गर्दा हामीपनि चकित भएर खोजी गरीरहका छौ , यो कसरी र किन भइरहेको छ भनेर ?
जव रानी मर्दछ, वा कमजोर हँुदै जान्छन उनले आपनो शरीरबाट फेरोमिन भन्ने सुवाश्ना निकाल्न सक्दिनन अनि त्यो माहुरीको गोला कमजोर हँुदै जान्छ । रानी मरेपछि केही वयश्क, मौरीहरुले आफू रानी भएको जस्तो भान गरी हैकम देखाउदछन । कही कही राजकीय खानापनि हडपेर खान्छन । यो प्रवृत्ति बढदै गएपछि त्यहाँ १ महिनापछि रानोको अभावमा कर्मीहरु कम हुदै जान्छन । भालेहरु नभएपछि र अण्डा नभएपछि मौरीको संख्यापनि घटदै गएर गोलासानो हुदै जान्छन । तिनीहरुमा नेता तथा नेत्रित्वको अभाव रहन्छ । मह लगाउने शीप, कलाको कमी आउदछ । शत्रुहरुले आकमण गर्दा जमेर लडने, शीप, तालिम, अभ्यास पनि अभाव रहन्छ । गोला भित्र अल्छिपना बढदै जान्छ र अशुभको प्रवेश हुन थाल्दछ । ती शत्रुहरु त्यसै जादैनन, त्यसपछि ती मौरीहरु जे पायो त्यही गर्न थाल्दछ तर घार छोडदैनन । उनीहरु जो जसलाई देखियो उमाथि आकमण गर्न जाइलाग्दछन, यसखालको मौरीलाई वित्पाते मौरी भनिन्छ । अर्थात पात विपरित हुने पटी लागेर मासिने भनेको अर्थ लाग्दछन । मेरो यो अध्ययन भौतिक ज्ञान तथा अन्टोमोलोजीमा आधारित भएको छ । ग्रामीण विकासमा थेशिस यसैमा गरिएको छ । उनीहरुमा रानी कहिले, कति खेर, कुन समयमा वनाउने भन्ने विषयको निर्धारण तथा त्यसको कार्यान्वयन पनि कर्मी मौरीलेनै गर्दछन ।
राजनीति गर्नेले मौरी पालन गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ आलङ्कारिक ज्ञान हुन्छ । । मेरा धेरै साथिहरुलाई यसको वारेमा मैले भन्ने सुनाउने गरेको छु । साथि डा. अमृत कुमार श्रेष्ट सह प्राध्यापक धरान क्याम्पसले एक तालिमका वीचमा “साँच्चै प्रजातन्त्र त माहुरीको घारमा भित्र घरभित्र रहेछ,” भन्नु भएको निकै सहर्षपूर्ण अभिव्यक्ति सार्थक लागेको छ । निर्वाचित भएपछि हज्जार गुना कर किन बढाइयो भन्दा भ्रष्टाचार गरी खान ? धन सम्पत्ति जम्मा गर्न जस्तो काम पनि यही वितपाते काम थियो । किनभने खान चाहि प्राकतिक कुरा रहेछ, लोभ पनि प्राकृतिक नै हो । तर यसलाई कमी बढी भने गराउन ज्ञान वुद्धि विवेकले सकिन्छ ।
पार्र्टीमा पनि नेता भनेको रानी जस्तै हो । उ जवान, जीउदो जाग्दो वलिया,े गुणी तथा उपकारी संरक्षक तथा अभिभावक जस्तो हुनु पर्दछ । यसले आपनो सवै कार्यकर्ताको लेखा जोखा हेकका राख्नु पर्दछ । सो नेताले सवै क्षेत्र, तह, वर्ग र सम्प्रदायका कार्यकर्ताहरुको वारेमा ज्ञान जानकारी राखी काम गर्नु पर्दछ । यदी शत्रु आईलागेमा सवै किसिमका नीतिहरु अपनाएर सामाना गर्नु पर्दछ । तर नेता कमजोर भयो, पार्र्टीमा कामगर्ने लगानी गर्ने शीप क्षमता योगदान तथा त्यागको हेला भयो, वेवास्ता भयो भने त्यो दलको गतिविधि यस्तै वित्पाते मौरीको जस्तो हुन्छ । उसले जो अगाडि आँउदछ उसलाई पीर वाधा कष्ट मात्र दिन्छ । के नेपालमा पार्टीहरु त्यस्तै त भइरहेका छैनन ? त्यहाँ तालिम पनि हुदैन, गोष्टि, छलफल विचार जागरण केहीपनि हुन पाउदैन, केवल घार कव्जा जमाएर बस्दा सवै थोक हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर वस्ने गर्दछ । त्यसले जनताहरुलाई पीरकष्ट मात्र दिन्छ । अहिले खाश गरी नेपाली काग्रेसको वारेमा चर्चा गर्दा धेरै मानिसहरुले वेवास्ता गरेको पाइन्छ । किनभने उनीहरु तथा उनीहरुका आम कार्यकर्ताहरु रानो विनाको माहुरी जस्तो लागीरहेका छन । नेता छन, तर विधि नीति नैतिकता, अनुशासन, निष्ठा कमजोर हुदै गएको पाइन्छ । कहियो पनि व्युत्यपाते मौरी जस्तो हुने त होइन ।
क्तै त्यागी निष्ठावान कार्यकर्ता सानेपा तिर जादा उसलाई उपत्यकाको चार भन्ज्यागबाट संस्थापन पक्षले लखेटेने होइन ? यो नियम काग्रेसमात्र नभएर सवैपनि पार्टीमा लाग्दछ । हिजो राजदरवारमापनि त्यही काम भएको हो । वी पी भन्दथे राजा र जनता बीचमा पर्खाल रहकोछ त्यो तोडन चाहान्छौ । वीरेन्द्र युरोपमा अध्ययन गरेको केही लोकप्रिय तथा लोकतन्त्रवादी राजालाई सुनियोतिज तवरले विताएको थप भन्नुनै पर्दैन, नयाँ व्यापारी राजालाई माओवादी लहड तथा संसदवादीहरुको भाले सातो उडाएर संवैधानिक राजतन्त्र उखालेर पयाकेको त्यही वित्पातेको कारण ले हो । त्यसमा केहीपनि द्विविधा छैन । त्यसकारणपनि नेपाल र नेपालीको अश्मितालाई जोगाउनकालागि यसको चर्चा वेला वेलामा गरीरहन पर्दछ कि सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भटराईले पछि सम्मपनि राजतन्त्रको औचित्य अहिलेपनि छ भन्ने गर्न‘ु भएको थियो ।
Tags: छाडा कार्यकर्ताव्युत्पाते मौरी
इलाम एपोलो हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरको सेवा शुरु